MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA CAANKA AH EE EYGA CAANKA AH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada Eeyaha Caanka Ah ee Eyga Caanka Ah
Cocker Spaniel / Eeyga Noocyada Isku Darsan ee Dahabka Ah
Isku-darka Cocker Spaniel / Isku-darka Dahabka Dahabka ah (Golden Cocker Retriever) 'Zoe waa 7 jir Cocker Spaniel / Dahab Golden Retriever ah. Iyadu waa eey aad u jecel oo haddana aad u ciyaar badan. Way caqli badan tahay! Way fadhiisan kartaa, gariiri kartaa, jiifsan kartaa, rogrogmi kartaa oo baryi kartaa. Zoe wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro dheelsiin! Way ku weyn tahay dadka iyo carruurta oo dhan, si kasta oo ay u weyn tahay iyo haddii ay yar tahayba. Waxay jeceshahay xayawaanka kale. Waxay ahayd eeygii ugu fiicnaa ee abid soo mara! Waxay ku saabsan tahay 17 'dherer iyo 22' laga bilaabo qoorta ilaa dabada. Waxay culeyskeedu yahay qiyaastii 40 rodol hadda markii loo keydiyay. Kahor intaan loo dhalan, waxay culeyskeedu ahaa 33 rodol. Way qurux badan tahay!
The Golden Cocker Retriever ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Cocker Spaniel . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafan ee Canine-ka Mareykanka = Ka-fariistaha Dahabka Dahabka ah
Naqshadeeyaha Eeyaha Naqshadeynta Naadiga = Kaydka Dahabka Dahabka ah
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Cocker Mareykan Isbaanishka x Dhaxalistaha Dahabka ah = Dhaxal sugaha Dahabka ah
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Ingiriisi Cocker Spaniel x Dahabiraha Dahabka ah = Ingriiska Comfort Golden
'Tani waa Rusty. Waxaan ka helnay dad aan daryeel fiican u haynin. Waa 2 jir iyo badh sawirkaan waana mid isku dhafan Dahab dahab ah / Cocker Spaniel. Eygan ayaa ah yaab leh ciyaartooy oo orod la'aan joogi karaya muddo dheer wuxuuna leeyahay lugaha dambe ee awoodda leh ee lagu boodayo. Isagu ma lahan awood dabbaal sida 8-jirkeena dahabiga ah, Rosie. Isagu waa eeyga ugufiican ee aad weydiisan karto, marwalba wuu la joogaa ciyaaro , weligaa qaniinin , jecel ciyaaro leh eeyo kale , oo had iyo jeer doonaya inuu banaanka guriga ka baxo. Ey reer weyn!
'Kani waa cookie oo jira 7 bilood. Waxay jeceshahay inay aaddo kalluumeysiga iyo dabaasha. Markii aan u saaro orodkeeda si ay u ciyaarto waxay i soo wici doontaa markay diyaar u tahay inay soo gasho iyadoo leh hooyo. Waxay jeceshahay inay soo qaadato kubadeeda iyo wubba laakiin waxay neceb tahay Frisbee. '
Callie the Golden Cocker Retriever, oo ay kuweeda ugu yeeraan 'Dakota Sport Retriever,' sida eey yar oo jirta 4 bilood - waa 50% Dahab dahab ah , 25% Cocker Mareykan ah iyo 25% Ingiriis Cocker . 'Callie waa dahab jiil labaad oo dahabi ah - oo macnaheedu yahay in labadeeda waalidba horeba isugu jireen Cocker Spaniel iyo Golden Retriever. Iyadu iyadu waxay ku leedahay xoogaa Ingiriis Cocker Spaniel iyada ah sidoo kale. Iyadu waa eey aad u macaan, caqli badan, ciyaar badan. Iyadu waa saaxiib wanaagsan oo ay wada ciyaaraan gabadhayda 2½-sano jirka ah iyo gabdhahayga waaweynna iyaduna way jecel yihiin. Waxay jeceshahay inay qaado ulo marka ay banaanka ku ciyaarayso iyo ku raaxeyso socod . Waxay ku qanacsan tahay inay ku seexato sariirteeda eyda dhexdeeda habeenkii. Waxay u tagtay orodkeedii ½-saac ee ugu horreeyay maalin kale waxayna sameysay si layaableh. Ma qiyaasi kari waayey xayawaan guri fiican leh! ' Waxaa uxurmay Dakota Winds Ranch
Callie the Golden Cocker Retriever, oo ay kuweeda ugu yeeraan 'Dakota Sport Retriever,' sida eey markay 9 todobaad jirsato — waa 50% Dahab dahab ah , 25% Cocker Mareykan ah iyo 25% Ingiriis Cocker . Waxaa uxurmay Dakota Winds Ranch.
shar pei iyo chow mix
Tiger, oo ah nin madow oo Dakota Sport ah oo dahabi ah, oo ay leedahay BB Acres— 'Dakota Sport Retrievers waxaa lagu dhajiyay iyadoo la isticmaalayo 50% Dahab dahab ah , iyadoo 50% kalena ay yihiin Mareykan iyo Ingiriis Cocker Spaniel iyaga dhexdooda ugu habboon 25% nooc kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay haystaan ​​in ka badan 37.5% midkood Ingiriis ama Cocker Spaniel oo Ingiriis ah, in ka yar 12.5% ​​kuwa kale.
Primo the Golden Cocker Retriever at 3 sano jir-? 'Primo wuxuu umuuqdaa sida nadiifiyaha dahabiga ah ee Dahabka ku nool deriska, wax badan oo aad u yar. Waxa uu leeyahay dabeecad dabacsan ee saaxiibkiis Golden Retriever iyo garaacista Cocker Spaniel. '
Nasiib (oo lagu naanayso Goomba) waa ku-guuleystaha bakhaarka dahabiga ah ee da'diisu tahay 15 jir
Primo the Golden Cocker Retriever at 3 sano jir iyada oo leh kubbadda ay ku ciyaarto
Lucky (oo lagu naanayso Goomba) Abaalmarinta Abaaraha Dahabka ah ee Da 'yarta ah ee 15 jirka ah - milkiilaheeda ayaa leh, Way quruxsan tahay caafimaadkeeduna wuu wanaagsan yahay da'deeda. Cunnadeeda ay jeceshahay waa bar-b-q waxayna ka boodaysaa derbiyada ilaa saqda dhexe! '
'Tucker waa jiilka 2aad ee' Golden Cocker Retriever '. Waxaan ka helay Tucker abuure. Isagu wuxuu ahaa eeyaha kaliya ee gaagaaban ee qashinka ku jira. Bixiyuhu ma garanaynin sababta uu ugu soo baxay gaaban, markaa baaritaanka DNA ayaa la sameeyay. Sifirkiisu wuxuu ahaa, runti, wuxuu ahaa aabihiis. Ma jiro sharaxaad macquul ah sababta uu u leeyahay timo gaagaaban, oo aan ka ahayn uun isagu! Isagu waa eey yar oo weyn iyo eey aad u macaan. Isagu waa nin jilicsan, jecel oo macaan. '
min pin qas chihuahua muqisho
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Dahablaha 'Cocker Retriever'
Sawirada Dahabka ah ee 'Cocker Golden'
Sawirada Dahabka ah ee Cocker Golden
shaybaarka madow sanka buluug ah isku darka ay ceelkii
cusub guinea singing eey
isku darka akita pitbull ee iibka ah
casaan iyo cadaan ciriiriyihii cunugga